Bogga ugu weyn Sida loo iibsado saamiyada Amazon sanadka 2022 | Tilmaan-Talaabo Tallaabo-fudud ah oo Fudud
Tan iyo markii uu dillaacay masiibada, suuqa saamiyada ayaa si weyn u burburay taasoo keentay in saamiyo badan oo shirkado ah ay la halgamaan. Dhammaan arrimahan oo dhan, sicirka saamiyada Amazon wuxuu lahaa dhaqdhaqaaq sare oo sare.
Maqaalkan waxaa loo qoray inuu ku tuso sida aad uga faa'iideysan karto fursadaha maalgashi ee weyn ee Amazon. Gaar ahaan, waxay ku tusaysaa sida loo iibsado kaydka amazon.
Amazon waa mid ka mid ah dukaamada tafaariiqda ee ugu weyn Mareykanka. Waa suuq internetka lagu kalsoon yahay oo malaayiin qof oo adduunka ah ku kala iibsadaan dhammaan noocyada alaabta iyo adeegyada.
Qiimaha saamiga ee shirkaddu wuxuu lahaa kor u kac aad u weyn tan iyo bishii Maarso intii lagu gudajiray cudurka faafa ee Coronavirus. Dakhliga Amazon wuxuu ku booday 37% ilaa $ 96.1 bilyan taasina waxay ka dhigeysaa meesha aad rabto inaad ku maalgaliso lacagtaada.
Maqaalkan, waxaan runtii ku tusayaa sida aad u iibsan karto saamiyada Amazon, goorta aad iibsaneyso kaydka, meesha aad ka iibsan karto kaydka iyo waxyaabo kaloo badan.
Haddaba samir ii raac safarkan.
Haddaba aan soo galno…
Waa maxay saamiyada Amazon?
Kaydadka Amazon waa xuquuq ay siiyaan shakhsiyaad iyo ururro Amazon taas oo u oggolaanaysa inay lahaadaan saamiga hantida iyo faa'iidada shirkadda.
Tirada saamiyada aad leedahay waxaa badanaa lagu cabbiraa inta saamiyadeed ee aad leedahay.
Immisa ayey ku kacaysaa iibsashada saamiyada Amazon?
Laga bilaabo Juun, sicirka saamiyada Amazon wuxuu ku socdaa qiyaastii $ 2,650 saami kasta, sidaa darteed waa muhiim inaad tixgeliso yoolalkaaga maalgashiga muddada-dheer kahor intaadan iibsan saamiyada Amazon.
Goorma ayay tahay waqtiga ugu fiican ee la iibsado saamiyada Amazon?
Amazon inta u dhaxaysa dillaaca masiibada ayaa noqotay mid ka macaash badan sidii hore waxayna diyaar u tahay koritaan dagaal badan. Falanqayntii ugu dambaysay waxay muujisay in Amazon ay tahay inay la kulanto saadaalin kale oo sare iyadoo dakhliyada Amazon ay qarka u saaran yihiin inay boodaan.
XIDHIIDHKA: Siyaabaha Ugu Wanaagsan Ee Loo Iibsado Dahabka 2022 | Hoggaamiyaha Khubarada
Sida laga soo xigtay Warbixin, Saadaasha 2022 -ka waxay ahayd $ 44.88, laakiin sida ay hadda tahay, waxaa la sii saadaalinayaa inay kor u kacdo in ka badan $ 50.
Tani waxay ka dhigan tahay in tani ay tahay waqtiga ugu wanaagsan ee lagu iibsan karo kaydka Amazon kahor intuusan kicin. Markaa haddii aad raadineyso inaad ogaato waqtiga ay tahay inaad iibsato kaydkaaga Amazon, hadda waa waqtigii.
Halkeen ka iibsan karaa saamiyada Amazon?
Waxaad ka iibsan kartaa saamiyada Amazon saamilay kasta. Waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa kaydka Amazon websaydhka rasmiga ah ee Amazon. Akhri maqaalkayaga Sida Loo Helo Kaararka Hadiyadda Amazon ee Lacag La'aanta ah: 24 Xeelado Lagu Helo Ilaa $ 100 Off.
Sida loo iibsado saamiyada Amazon: Tallaabada Tusaha Tallaabada
Marka halkan qaybtan, waxaan ku tusayaa sida saxda ah ee ay tahay inaad u iibsato kaydkaaga Amazon. Laakiin ka hor intaanan kuu sheegin waxaad u baahan tahay inaad ogaato, aan si dhaqso leh kugula taliyo: kaliya maal geli qaddar aad awoodi karto inaad lumiso marka aad maalgelinayso hawl kasta. Kaydku wuxuu noqon karaa mid aad u caato ah. Haddii aadan taxaddarin, waxaad waayi kartaa lacagtaada.
Marka bal aan eegno siyaabaha aad u maalgashan karto Amazon. Tani waa tallaabo la aamminsan yahay in lagu tallaabsado sida laga helay benzinga.com. Runtii qaado waqtigaaga si aad u akhrido.
Tallaabada 1: Go'aanso inta aad rabto inaad maalgashato
Tallaabada ugu horreysa ayaa ah inaad go'aansato inta aad rabto inaad si wanaagsan u maal gashato waqtigeeda. Tani waxay kaa badbaadin doontaa jahwareer badan oo u dhexeeya. Markaa, waxaad u baahan doontaa inaad runtii ku samayso baaritaan badan oo ku xeeran si ay kaaga caawiso inaad go'aansato.
XIDHIIDHKA: 10 -ka Ciyaar Ee Ugu Qaalisan Adduunka 2022 -ka
Tallaabada 2: Dooro Dillaal onlayn ah
Habka ugu fudud ee si toos ah loogu iibsado saamiyada Amazon waa koonto dilaalnimo, oo ay tahay inaad furto haddii aadan hore u lahayn. Markaad go'aamiso inta aad jeceshahay inaad maalgashato, waxaad la xiriiri kartaa dillaali oo aad iska qori kartaa koonto, maalgelin kartaa koontada, ka dibna ku rid amarka “iibso” saamiyada.
Tusaalooyinka aaladaha dilaaliinta caanka ah ee aad la xiriiri karto waxaa ka mid ah:
Tallaabada 3: Iibso xaddiga saamiyada AMZN ee aad rabto.
Markaad ku xidhnaato dillaal, waxa ku xiga waxay noqon doontaa inaad iibsato kaydkaaga.
Guud ahaan waxaa jira laba nooc oo ah amarada “iibso”: dalabka suuqa iyo kala xadaynta. Amarka suuqa wuxuu ku fulin doonaa iibsiga sicirka suuqa ee hadda jira, halka amarka xaddidan uu fulin doono oo kaliya haddii qiimaha uu ku dhaco ama ka hooseeyo qiimaha xadka.
In kasta oo qiimaha xadka laga yaabo inuu ku siiyo qiimo hoose oo gelitaanka, ma jiro wax dammaanad ah in amarka xaddidan uu fulin doono.
Akhri: Sida Loo Kordhiyo Xadkaaga Dhibcaha Chase 2022
Saadaasha Mustaqbalka ee Kaydka Amazon
Sida laga soo xigtay benzinga.com, waxay qaadatay toddoba sano iyo bar in Amazon ay gaarto $ 1,000 halkii ay ka ahayd $ 100 aadna waa suurtogal in ay ku dhufato $ 10,000 inta u dhaxaysa 2023 iyo 2025. Awoodda Amazon ee ah inay koraan ayaa sii socon karta waqti ka dib.
Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Maalgelinta Saamiyada Amazon
Faa'iidooyinka Maalgelinta Saamiyada Amazon
Jeff Bezos oo ah maamulaha guud ee Amazon ayaa maalgeliya fursadaha kobaca. Waa hoggaamiye aragti fog leh oo hoggaamiya suuqyo waaweyn oo soo jiita oo dhiirrigeliya shaqsiyaadka kartida leh. Sidaa darteed, saamigaaga Amazon waa inuu ku sii kordhaa si tartiib tartiib ah.
Shirkaddu waxay leedahay rabitaan ah inay suulka geliso warshado kala duwan oo ballaariya faa'iidadiisa oo soo noqota.
XIDHIIDHKA: Dib -u -eegista Imarketslive 2022: Ma sharci baa mise waa khiyaano kale oo Forex Trading
Qasaarooyinka iibsashada saamiyada Amazon
Waa qaali. Laga bilaabo Diseembar 16, AMZN waxay ku furtay 3,165.12 USD saami kasta.
Amazon ayaa wajaheysa kordhinta tartanka iibka tooska ah ee macaamilka ee tooska ah.
Shirkaddu waxay wajahaysaa qiimeyn xad dhaaf ah iyo khataro sharciyeed.
Markaa si kooban, halkan waa talaabada tusaha tusaha talaabada si ay kaaga caawiso inaad go'aansato haddii aad maalgashanayso kaydka Amazon iyo in kale.
Xusuusnow, waxaan hore kula taliyay in haddii aad waligaa qabanayso fursad kasta oo maalgashi, hubso inaad ku samayso lacagtaada firaaqada ah. Ku maal geli kaliya lacagta aad awoodi kartid inaad lumiso marka aad weydo.
Sida Loogu Sameeyo Lacag Suuqa Suuqa 2022: Tilmaan Buuxo
Sida Lacag Loogu Sameeyo 50000 oo Doollar Sannadka 2022: Hagaha Tallaabo-Tallaabo ah
Berdaha ma bixiyaa qiimo dhimis arday? | 2022
Waxaad joogtaa meesha saxda ah haddii aad halkan timi adigoo raadinaya lambarada dhimista berdaha, dhimista berdaha…
Kaydka Moderna hadda ma wax iibsadaa?
Helitaanka saamiyada shirkad biotechnoolajiyadeed oo muhiim ah sida Moderna waxay calaamad u noqon kartaa isbeddelka maalgashigaaga. Sidan…
Waa maxay Lacagta Brokerage? Sidee U Isticmaali Kartaa?
Markaa waxaad ku urursatay xoogaa lacag caddaan ah akoonkaaga dillaalnimada. Waxaa laga yaabaa inaad iibsatay qiimo jaban oo aad iibisay…